Sam Mtukudzi Laid to Rest - allAfrica.com
Hundreds of people thronged Warren Hills Cemetery to bid farewell to Sam Mtukudzi and Owen Chimhare who were killed in a road accident.
The Herald, 18 March 2010
HUNDREDS of people, including the who's who of Harare, yesterday thronged Warren Hills Cemetery to bid farewell to Sam Mtukudzi and Owen Chimhare who were killed in a road accident… Read more »
Late musician Sam Mtukudzi
People from all walks of life on Tuesday expressed shock and disbelief over the tragic death of musician Sam Munyaradzi Mtukudzi. Read more »
Zimbabwe: Sam Mtukudzi to Be Laid to Rest Today
The Herald, 17 March 2010
SAM MTUKUDZI and his friend Owen Chimhare, who were killed in a road accident on Monday morning, will be buried today at Warren Hills Cemetery at 2pm. Read more »
Zimbabwe: Sam - Death of a Generation
SAM MTUKUDZI, who died in a car crash on Monday morning just outside Harare, was to his father a bright spark when his fortunes were at an all-time low and his death represents the… Read more »
Zimbabwe: President Consoles Mtukudzis
PRESIDENT Mugabe has said the deaths of Sam Mtukudzi and Owen Chimhare robbed Zimbabwe of two young men of great promise in the music industry. Read more »
Zimbabwe: Music Star Sam Mtukudzi Dies
The Herald, 16 March 2010
Samson Mtukudzi (21), son of music superstar Oliver Mtukudzi, died early yesterday morning after he was involved in a road accident near Kuwadzana Extension along the… Read more »
Zimbabwe: It Was My Fault, Says Grief-Stricken Dad
OLIVER MTUKUDZI believes he is to blame for the death of his son Sam, who perished in a car crash along the Harare-Bulawayo Highway in the early hours of yesterday. Read more »
Zimbabwe: Sam - End of a Dream
In the past few weeks, the phrase "Nzou nemhuru mudanga" (The elephant and its calf in the pen) dominated entertainment circles. Read more »